‘कार्गो ट्र्याकिङ’ले विस्थापित हुने भएपछि बिचौलियाहरु हडतालमा, आयात नै ठप्प ! « GDP Nepal
‘कार्गो ट्र्याकिङ’ले विस्थापित हुने भएपछि बिचौलियाहरु हडतालमा, आयात नै ठप्प !
Published On : 1 February, 2019 6:26 am
काठमाडौं । आउँदो फागुन ३ गतेदेखि लागू हुन लागेको ‘इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) रोक्न नेपाल र भारत दुवै देशका व्यवसायीहरू नै चलखेलमा लागेका छन् । नेपाल र भारत सरकारको सहमतिमा यो व्यवस्था लागू भए पनि बिचौलियाहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
बिचौलियाको भूमिकामा रहेका भारतीय भन्सारका क्लियरिङ एजेन्ट, ट्रक र ट्रेलरका सञ्चालक र ढुवानी व्यवसायीले नेपालतर्फ सामान पठाउनै रोकेका छन् । जसले गर्दा करिब ७ सय कन्टेनर भारततर्फ रोएिको नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले जानकारी दिए ।
भारतीय बिचौलियाहरुले मंगलबारदेखि ढुवानी ठप्प पारेका हुन् । उनीहरुलाई नेपालकै फ्रेट व्यवसायीहरुले समेत साथ दिएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार भेला गरी थप कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।
विद्युतीय ट्रयाकिङ लागू भएपछि कोलकातामा क्लियरिङ गर्नु नपर्ने र रेलले वीरगन्जसम्म नै सामान ल्याइदिने भएपछि भारतीय भूमिमा नेपालीका लागि एजेन्ट र ढुवानीकर्ताको काम गर्दै आएकाहरु स्वतः विस्थापित हुनेछन् ।
तर, आफूहरूलाई पर्याप्त समय नदिइ यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सयौं भारतीय क्लियरिङ एजेन्ट, कार्गो कम्पनी तथा ट्रक कन्टेनर व्यवसायीहरू बेरोजगार हुनेछन् ।
यस्तै, नेपालबाट फ्रेट फरवार्डर्स व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको पनि व्यवसाय खुम्चने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोही कारण भारतीय व्यवसायी तथा मजदुर आन्दोलित छन् र उनीहरूलाई केही नेपाली व्यवसायीले समेत साथ दिइरहेको पाइएको छ ।
हाल कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८ देखि १० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झट थियो ।
तर, अब वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमै यो काम हुनेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ ।